केपी ओली कुहिएको अण्डा : प्रचण्ड - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कुहिएको अण्डाको संज्ञा दिएका छन् । शनिबार पार्टी समायोजना तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
सम्बोधनको क्रममा दाहालले भने-“माओत्से तुङले बिग्रिएका कम्युनिष्टको बारेमा अण्डा स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ, प्रोटिन हुन्छ, धेरै चिज प्राप्त हुन्छ, तर अण्डा कुहियो भने त्यो भन्दा गन्धा चिज अरु केही पनि हुँदैन् ।कम्युनिष्टहरु राम्रा हुन्छन्, तर बिग्रिन थाले र गन्हाउने थाले भने त्यो भन्दा नराम्रो कोही हुँदैन भन्दै केपी ओली त्यही कुहिएको अण्डा हो । त्यो कुहिएको अण्डा त खाईँदैन नि, त्यसलाई त डफ्काईन्छ ।”
फरक प्रसँगमा उनले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव आफूले कोरेको गोरेटोमा आएको भन्दै बधाई दिएका छन् । शनिबार पार्टी समायोजना तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,”छिट्टै उहाँलाई यस्तै कार्यक्रममा स्वागत गर्न प्रतिक्षारत छु ।
जहाँसम्म मैले उहाँलाई चिनेको छु, अन्ततः उहाँ यही ठाउँमा, यही टिममा, आउनैपर्छ । यो कुरा मैले धेरै पहिले भनेको थिएँ । अर्को प्रचण्ड हुँदैन भनेर भनेको थिएँ । अन्ततः उहाँ प्रचण्डकै बाटोमा आउनुभयो । त्यसकारण पनि म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।” उनले नेकपा अहिलेको आधिकारिकता, वैधानिक पार्टी भएको जिकिर गरे ।
संसदीय दल बैठकमा ओलीले भने- हामी आत्तिनु पर्ने केही छैन, मजाले अगाडि बढ्न सक्छौं
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ओली समूहको संसदीय दलको बैठक सकिएको छ।
शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा ओली समूहका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदका गतिविधिमा सक्रियतापूर्वक केन्द्रित हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले सांसदहरू नआत्तिन पनि सुझाए। ‘हामी आत्तिनु पर्ने केही छैन। संसद चल्छ। हामी मजाले अगाडि बढ्न सक्छौं। हामी ढुक्क अवस्थामा छौं’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद किसान श्रेष्ठले भने।
आफूहरूको संख्या पनि बढ्दै जाने उनले बताए। ‘आज ११५ छौं। भोलि १२० हुन्छौं’, हाम्रो संख्या बढ्दै जान्छ’, उनले भने। बैठकमा ११५ सांसद उपस्थित भएको ओली समूहको दाबी छ। यद्यपि बालुवाटारभित्र कुनै पत्रकारलाई छिर्न दिइएको थिएन।
यसका साथै, प्रधानमन्त्रीले संसदमा दृढताका साथ अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताएका छन्। भट्टराईले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कसैले हिम्मत समेत नगर्ने बताए।
‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कसैले हिम्मत गर्दैनन्। जो बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि फर्कनुहुन्छ। नेकपा विभाजन हुन कठिन छ,’उनले भने। बैठकमा वामदेव गौतम, लालबाबु पण्डित र तुलसा थापा उपस्थित थिएनन्। उनीहरू प्रचण्ड-नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकमा पनि सहभागी थिएनन्।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा बाँडिएको छ। प्रचण्ड–नेपाल समूहले शुक्रबार संसदीय दलको बैठक गरेको थियो। उक्त बैठकले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। सो समूहले आफ्ना पक्षमा १ सय ११ सांसद रहेको दाबी गरेको छ। आइतबार संसद बैठक बस्दैछ।
# प्रचण्ड # प्रधानमन्त्री केपी ओली
शनिवार, फाल्गुण २२ २०७७०५:२९:३१
जिल्ला सभापति बरालको आरोप : प्रधानमन्त्री ओली अनुशासनहीन भए !
माओवादीले किन समर्थन गरिरहेको छ सरकारलाई ? शक्ति बस्नेतले दिए जवाफ
प्रदीप गिरीले भने –राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाऔँ